Mask တပ်တာ ကိုဗစ် ကူးစက်မှု လျှော့ကျေ စကြောင်း ကြွက်ကလေးတွေ နဲ့ စမ်းသပ်တွေ့ရှိ – Let Pan Daily
🇭🇰 ဟောင်ကောင် တက္ကသိုလ်က သုသေသန ပညာရှင်တွေဟာ Mask တပ်ခြင်းဖြင့် ရောဂါ ကူးစက်မှုလျော့ကျမှု ရှိ မရှိ စမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
Professor Yuen Kwok-yung ဦးဆောင် တဲ့ ကမ္ဘာ့ ထိပ်တန်း ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ဟာ Hamster ကြွက်ကလေးတွေကို Covid-19 ကူးစက်စေခဲ့ပါတယ်။ ​ရောဂါကူးစက်ခံထားရတဲ့ ကြွက်ကလေးတွေမှာ symptomatic လို့ခေါ်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာပြနေတဲ့ ကြွက်ရော၊ asymptomatic လို့ခေါ်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာမပြ တဲ့ ကြွက်ရောပါပါတယ်။ အဲ့ဒီရောဂါကူးစက်ခံထားရတဲ့ ကြွက်ကလေးတွေကို လှောင်အိမ်တစ်ခု၊ ရောဂါမရှိသေးတဲ့ ကျန်းမာတဲ့ကြွက်ကလေးတွေကို လှောင်အိမ်တစ်ခု ခွဲထားပါတယ်။ ဒါမှ မရောသွားပဲ လေ့လာရလွယ် မှာဖြစ်ပါတယ်။
လေကို ရောဂါကူးစက်ခံထားရတဲ့ကြွက်တွေရှိ တဲ့ လှောင်အိမ်ဘက်ကနေ ရောဂါ မရှိတဲ့ကြွက်တွေရှိတဲ့ လှောင်ဘက်ကို တိုက်စေ ပါတယ်။ အဲ့လိုလုပ်ရာ မှာ အောက်ပါတွေ့ရှိချက်ကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အကယ်၍ လှောင်အိမ်နှစ်ခု စလုံးကို Mask လုံးဝမကာထားရင် ကျန်းမာတဲ့ကြွက်တွေရှိတဲ့ လှောင်အိမ်ထဲက ကြွက် ၃ ပုံ ၂ ပုံဟာ ရောဂါကူးစက်ခံရပါတယ်။
အကယ်၍ ရောဂါရှိနေတဲ့ကြွက်တွေ ရှိတဲ့ လှောင်အိမ်ကို Mask နဲ့ကာထားရင် ကျန်းမာတဲ့ကြွက်တွေ ရှိတဲ့ လှောင်အိမ်ထဲကကြွက် ၁၅ ရာနှုန်းကျော်လေးပဲ ရောဂါကူးစက်ခံရပါတယ်။
အကယ်၍ ကျန်းမာတဲ့ကြွက်တွေရှိတဲ့ လှောင်အိမ်ကို Mask နဲ့ကာထားရင် ကျန်းမာတဲ့ ကြွက်တွေ ထဲက ကူးစက်မှု ၃၅ ရာနှုန်းလျော့ကျသွားစေပါတယ်တဲ့။
ကျနော် နားလည်သလို ပြန်ရှင်း ရရင်..
ဘာမှမကာထားရင် ကျန်းမာတဲ့ အကောင်တွေထဲက 67 % ရောဂါအကူးစက်ခံရမယ်။ မကျန်းမာတဲ့အကောင်တွေကို Mask ကာထားရင် ကျန်းမာတဲ့အကောင်တွေထဲက ၁၅% ကျော်ပဲ ရောဂါအကူးစက်ခံရမယ်။
ကျန်းမာ တဲ့အကောင်တွေကို Mask ကာထားရင် ကျန်းမာတဲ့ အကောင်တွေထဲက ၃၂% ရောဂါအကူးစက်ခံရမယ်။ (မူလ ၆၇% ထဲက ၃၅% လျော့ကျသွားလို့ ၃၂% လို့ရေးထားတာပါ)
အဲ့မှာ ထပ်ပြော ထားတာက….
Mask ဘယ်လိုပဲကာကာ Mask သုံးတာနဲ့ အကူး စက်ခံရတဲ့ကြွက်တွေမှာတွေ့ရတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပမာဏက Mask မသုံးတဲ့အချိန်မှာ တွေ့ရတဲ့ ပမာဏထက် ပိုနည်းပါသတဲ့။ အဲ့ဒီတော့ Mask ကိုအားလုံးမေးမှာမချိတ်ပဲ အပြည့်အဝတပ်ခြင်းဖြင့် ကူးစက်မှုကို အတော်ကြီးကို လျော့ချနိုင် လိမ့်မယ်။
ရောဂါရှိနိုင်ပြီး လက္ခဏာမပြတဲ့သူတွေ က Mask တပ်ဖို့ ပိုအရေးကြီးတယ်။ ရောဂါရှိနိုင်ပြီးလက္ခဏာမပြတဲ့သူကဂျိုမပါတော့ အားလုံး အပြင်ထွက်ရင်မေးမှာမချိတ်ပဲ အပြည့်အဝ Mask တပ်ပေးကြပါ။
🇭🇰 ဟောငျကောငျ တက်ကသိုလျက သုသသေန ပညာရှငျတှဟော Mask တပျခွငျးဖွငျ့ ရောဂါ ကူးစကျမှုလြော့ကမြှု ရှိ မရှိ စမျးသပျခဲ့ကွပါတယျ။
Professor Yuen Kwok-yung ဦးဆောငျ တဲ့ ကမ်ဘာ့ ထိပျတနျး ကိုရိုနာ ဗိုငျးရပျကြှမျးကငျြသူအဖှဲ့ဟာ Hamster ကွှကျကလေးတှကေို Covid-19 ကူးစကျစခေဲ့ပါတယျ။ ရောဂါကူးစကျခံထားရတဲ့ ကွှကျကလေးတှမှော symptomatic လို့ချေါတဲ့ ရောဂါလက်ခဏာပွနတေဲ့ ကွှကျရော၊ asymptomatic လို့ချေါတဲ့ ရောဂါလက်ခဏာမပွ တဲ့ ကွှကျရောပါပါတယျ။ အဲ့ဒီရောဂါကူးစကျခံထားရတဲ့ ကွှကျကလေးတှကေို လှောငျအိမျတဈခု၊ ရောဂါမရှိသေးတဲ့ ကနျြးမာတဲ့ကွှကျကလေးတှကေို လှောငျအိမျတဈခု ခှဲထားပါတယျ။ ဒါမှ မရောသှားပဲ လလေ့ာရလှယျ မှာဖွဈပါတယျ။
လကေို ရောဂါကူးစကျခံထားရတဲ့ကွှကျတှရှေိ တဲ့ လှောငျအိမျဘကျကနေ ရောဂါ မရှိတဲ့ကွှကျတှရှေိတဲ့ လှောငျဘကျကို တိုကျစေ ပါတယျ။ အဲ့လိုလုပျရာ မှာ အောကျပါတှရှေိ့ခကျြကို တှရှေိ့ခဲ့ပါတယျ။
အကယျ၍ လှောငျအိမျနှဈခု စလုံးကို Mask လုံးဝမကာထားရငျ ကနျြးမာတဲ့ကွှကျတှရှေိတဲ့ လှောငျအိမျထဲက ကွှကျ ၃ ပုံ ၂ ပုံဟာ ရောဂါကူးစကျခံရပါတယျ။
အကယျ၍ ရောဂါရှိနတေဲ့ကွှကျတှေ ရှိတဲ့ လှောငျအိမျကို Mask နဲ့ကာထားရငျ ကနျြးမာတဲ့ကွှကျတှေ ရှိတဲ့ လှောငျအိမျထဲကကွှကျ ၁၅ ရာနှုနျးကြျောလေးပဲ ရောဂါကူးစကျခံရပါတယျ။
အကယျ၍ ကနျြးမာတဲ့ကွှကျတှရှေိတဲ့ လှောငျအိမျကို Mask နဲ့ကာထားရငျ ကနျြးမာတဲ့ ကွှကျတှေ ထဲက ကူးစကျမှု ၃၅ ရာနှုနျးလြော့ကသြှားစပေါတယျတဲ့။
ကနြျော နားလညျသလို ပွနျရှငျး ရရငျ..
ဘာမှမကာထားရငျ ကနျြးမာတဲ့ အကောငျတှထေဲက 67 % ရောဂါအကူးစကျခံရမယျ။ မကနျြးမာတဲ့အကောငျတှကေို Mask ကာထားရငျ ကနျြးမာတဲ့အကောငျတှထေဲက ၁၅% ကြျောပဲ ရောဂါအကူးစကျခံရမယျ။
ကနျြးမာ တဲ့အကောငျတှကေို Mask ကာထားရငျ ကနျြးမာတဲ့ အကောငျတှထေဲက ၃၂% ရောဂါအကူးစကျခံရမယျ။ (မူလ ၆၇% ထဲက ၃၅% လြော့ကသြှားလို့ ၃၂% လို့ရေးထားတာပါ)
အဲ့မှာ ထပျပွော ထားတာက….
Mask ဘယျလိုပဲကာကာ Mask သုံးတာနဲ့ အကူး စကျခံရတဲ့ကွှကျတှမှောတှရေ့တဲ့ ဗိုငျးရပျဈပမာဏက Mask မသုံးတဲ့အခြိနျမှာ တှရေ့တဲ့ ပမာဏထကျ ပိုနညျးပါသတဲ့။ အဲ့ဒီတော့ Mask ကိုအားလုံးမေးမှာမခြိတျပဲ အပွညျ့အဝတပျခွငျးဖွငျ့ ကူးစကျမှုကို အတျောကွီးကို လြော့ခနြိုငျ လိမျ့မယျ။
ရောဂါရှိနိုငျပွီး လက်ခဏာမပွတဲ့သူတှေ က Mask တပျဖို့ ပိုအရေးကွီးတယျ။ ရောဂါရှိနိုငျပွီးလက်ခဏာမပွတဲ့သူကဂြိုမပါတော့ အားလုံး အပွငျထှကျရငျမေးမှာမခြိတျပဲ အပွညျ့အဝ Mask တပျပေးကွပါ။